I-China L-Leucine CAS 61-90-5 yeeFarma Grade (USP) abavelisi kunye nabathengisi | Ndiyabulela
Igama lemveliso:: L-Leucine
I-L-Leucine (Isifinyezo seLeu) yenye ye-18 yee-amino acid, kunye nenye yee-amino acid ezisibhozo emzimbeni womntu. Ibizwa ngokuba yi-branched chain amino acid (BCAA) ene-L-Isoleucine kunye ne-L-Valine ngokudibeneyo kuba zonke zinekhonkco lecala le-methyl kulwakhiwo lweemolekyuli.
Njenge-amino acid ebalulekileyo, inokusetyenziswa njengesongezelelo sesondlo kwaye ihlala isetyenziswa kwimveliso yesonka kunye nesonka. Ingasetyenziselwa ukulungiswa kwesisombululo se-amino acid, ukunciphisa i-glucose yegazi. Ngaphandle koko, inokusetyenziselwa ukukhuthaza ukukhula kwezityalo.
ILeucine ingasetyenziswa njengesongezelelo sesondlo, isinongo kunye nencasa. Ingasetyenziselwa ukulungiselela ukumpontshelwa kwe-amino acid kunye nokufakwa kwenaliti ye-amino acid, iarhente yehypoglycemic kunye nokukhulisa ukukhula kwezityalo.
Imisebenzi yeLeucine ibandakanya ukusebenzisana ne-isoleucine kunye ne-valine ukulungisa izihlunu, ukulawula iswekile yegazi kunye nokubonelela umzimba ngamandla. Ikwanokuphucula ukuphuma kwehomoni yokukhula, incede ekutshiseni i-visceral fat; la mafutha angaphakathi emzimbeni kwaye ayinakusetyenziswa ngokufanelekileyo ngokutya nangokuzilolonga.
I-Leucine, isoleucine, kunye ne-valine zii-amino acid ze-branched, ezilungele ukukhuthaza ukubuyiswa kwemisipha emva koqeqesho. I-Leucine lelona candelo le-amino acid lisebenza ngokukuko elinokuthintela ukulahleka kwemisipha kuba inokusonjululwa ngokukhawuleza kwaye iguqulwe ibe siswekile. Ukongeza i-glucose kunokuthintela ukonakala kwezihlunu zemisipha, ngenxa yoko kufanelekile ngakumbi ukwakha umzimba ILeucine ikwaphucula ukunyanga kwamathambo, ulusu kunye nezihlunu ezonakalisiweyo zemisipha, ukuze oogqirha baqhele ukucebisa ukufaka isongezo se-leucine emva kotyando.
Eyona mithombo yokutya ilungileyo ibandakanya irayisi emdaka, iimbotyi, inyama, amandongomane, isidlo seembotyi zesoya, kunye neenkozo ezipheleleyo. Kuba luhlobo lweamino acid ebalulekileyo, oko kuthetha ukuba ayinakuveliswa ngabantu ngokwabo kwaye inokufumaneka kuphela ngokutya. Abantu ababandakanyeka kwimisebenzi yomzimba enamandla kunye nokufumana ukutya okusezantsi kweeprotein kufuneka baqwalasele ukongeza i-leucine. Nangona inokufaka ifom yokuxhasa ezizimeleyo, kukhethwa ukuba yongezwe ngokudibeneyo ne-isoleucine kunye ne-valine. Ke ngoko uhlobo oluxubileyo lokuncedisa lulunge ngakumbi.
Umgubo omhlophe wekristale
Egqithileyo IGlycine CAS 56-40-6 kwiBakala lePharma (USP / EP / BP)
Okulandelayo: I-L-Lysine HCL CAS 657-27-2 yeBakala lePharma (USP)
Ikhemesti yeBakala L-Leucine, Ukutya kwezilwanyana, L-Threonine Pharm kwiBakala, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine kwiBakala lokutya, I-L-Valine 72-18-4,